Marka saaxiibbadaada ugu fiican ay rabaan inaad is tallaasho ...
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Marka saaxiibbadaada ugu fiican ay rabaan inaad is tallaasho…
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Education • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Marka saaxiibbadaada ugu fiican ay rabaan inaad is tallaasho…
Dadka Mareykanka ah ayaa saaxiibo ku daadinaya tallaalka COVID-19
Ra'yiururinta ayaa muujisay in 97% dadka la tallaalay ay u tixgeliyaan saaxiibadood hore inay yihiin "anti-vaxxers buuxa" waxayna sheegeen inaysan waligood ka heli karin inay fahmaan muhiimadda ay leedahay tallaallada.
14% dadka Maraykanka ah ee la tallaalay ayaa saaxiibtinimo ka dhex abuuray dadka ka baxay tallaalka.
81% jawaabeyaasha sahanka Dimuqraadiga ayaa sheegay in si buuxda loo tallaaley.
64% jawaabeyaasha sahanka Jamhuuriga ayaa sheegay in si buuxda loo tallaaley.
Ra'yi ururin cusub oo dalka oo dhan ah, oo la sameeyay horraantii Sebtembar, ayaa shaaca ka qaadday in 16% dadka deggan Mareykanka ee ka qayb qaatay sahanka ay dhammaadeen ugu yaraan saddex saaxiibtinimo sannadkii iyo badhkii la soo dhaafay. Qiyaastii 14% dadka Mareykanka ah ee la tallaalay ayaa sheegay inay xiriir la sameeyeen saaxiibadood kuwaas oo doortay inaysan ka talaalin COVID-19.
Dadka Mareykanka ah ayaa iska tuuraya asxaabtooda noloshooda inta lagu gudajiro xiisadda coronavirus, iyo kuwa doortay inay jabiyaan, jagooyinka saaxiibbada ee tallaalka COVID-19 badiyaa waxay ahaayeen xiriir-jabiyaha.
Dhab ahaantii, jawaabeyaasha la tallaalay waxay ku dhowaad afar jeer u badan yihiin kuwa aan doonaynin inay qaataan jabs - 66% ilaa 17% - inay soo afjareen saaxiibtinimadii muddadii masiibada. Ra'yiururinta ayaa muujisay in 97% dadka la tallaalay ay u tixgeliyaan saaxiibadood hore inay yihiin "anti-vaxxers-buuxa" waxayna sheegeen inaysan waligood ka heli karin inay fahmaan muhiimadda ay leedahay tallaallada.
Tallaalka COVID-19 waa mid ka mid ah arrimaha ugu kala qaybsanaanta badan ee keenaya kala fogaanshaha dadka Maraykanka ah. 14% kuwaas oo sabab uga dhigay joojinta saaxiibtinimada marka la barbar dhigo 16% oo eedeeyey kala duwanaanshaha siyaasadeed iyo 15% oo saaxiibkii hore la haasaaway saaxiib hore. Sababaha kale waxaa ka mid ahaa inay ogaadeen saaxiibadood inay ahaayeen beenaalayaal (7%) iyo inay saaxiib yeeshaan sheekooyin iyaga ku saabsan (12%).
Hollywood -ka ayaa sida muuqata barakeysay fikradda ah in la tuuro saaxiibbo diida in la tallaalo. Atariishada Jennifer Aniston - si layaab leh, xiddig ka ah taxanaha telefishanka ee 'Saaxiibada' - ayaa bishii hore ku sheegtay wareysi ay siisay majaladda InStyle in ay soo afjartay xiriirkii ay la lahayd dadka diiday in la jabsado ama doortay in aysan u sheegin xaaladdooda tallaalka. “Waa ceeb dhab ah,” ayay tiri. "Hadda waxaan ku waayey dhowr qof jadwalkayga toddobaadlaha ah."
Aktarada Jennifer Aniston
Heerka tallaalka vitriol ayaa sare u kacay toddobaadyadii la soo dhaafay. Superstar -ka idaacadda Howard Stern ayaa dhawaan qarxiyay “dhammaan waddooyinka s ** ee dalkeenna ee aan la tallaalin” wuxuuna yiri kuwa aan qaadan jaadka waa in loo diido sariiraha isbitaalka haddii ay xanuunsadaan. “Guriga joog, halkaas ku dhin COVID -gaaga,” ayuu yidhi.
Superstar -ka Raadiyaha Howard Stern
New ayaa sheegay in 81% jawaabeyaasha sahanka Dimuqraadiga si buuxda loo tallaaley, marka la barbar dhigo 64% dadka Jamhuuriga ah iyo 69% madax -bannaanida. Qiyaastii 57% Jamhuuriyiinta iyo 41% Dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in bulshadu "aad u dhaliishay" dadka Mareykanka ah ee aan la tallaalin.
Dulqaadka madaxbannaanida tallaalka ayaa sii yaraanaya USA, iyadoo Madaxweyne Joe Biden uu todobaadkii hore amar ku siiyay dhammaan meheradaha leh 100 ama ka badan oo shaqaale ah inay ku qasbaan shaqaalahooda inay helaan tallaalka. "Waan samirnay, laakiin dulqaadkeennu waa mid khafiif ah, diidmadaaduna dhammaanteen way nagu kacday," ayuu Biden ka yiri dadka Mareykanka ah ee aan la tallaalin.